Jamaal iyo Zakariye oo daadkii Boosaaso qaaday | KEYDMEDIA ENGLISH
Jamaal iyo Zakariye oo daadkii Boosaaso qaaday
Jamaal, wuxuu bartamihii 2021, hay'adaha iyo ururada caalamiga ah u qaybiyay warbixino uu kaga been-abuuranayo sida qabiilada Soomaaliyeed u kala deggan yihiin Muqdisho, si mustaqbilka dadka asal ahaan ka soo jeeda gobolka Banaadir loo barakiciyo.
BOOSAASO, Soomaaliya - Wasiirka Qorsheynta, Jamaal Maxamed Xasan iyo Xildhibaan Zakariye Xaaji Cabdi, oo ka mid ah, shaqsiyaadka ugu caansan ee muddada dheer ku daabnaa Farmaajo, ayaa laga reebay tartanka kuraasta taalla Boosaaso.
Guddiga doorashooyinka heer dowlad gobolleed ee Puntland, [SEIT] oo dhawaan soo saaray magacyada musharaxiinta u tartamaya 16 ka kursi ee doorashadoodu ka dhacayso Boosaaso, ayaa kuraastii ay Jamaal iyo Zakariye, u tartamayeen u xiray shaqsiyaad kale.
Kursiga HOP169, oo baarlamaankii 10-aad uu ku fadhiyay Wasiirka Qorsheynta, Jamaal, ayaa loo xiray Cali Mahdi Maxamed [Qalato], halka, HOP036, oo Xildhibaan Zakariye Xaaji Cabdi, muddo ku fadhiyay, loo xiray Maxamed Aadan Diini.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullahi Deni, ayaa Isimada beelaha leh kuraastaan, u adeegsaday, in meesha laga saaro, labadaan xubnood, kuwaas oo eedo kala duwan dul-hoganayaan.
Jamaal Maxamed Xasan, ayaa hore lagu eedeeyay musuq-maasuq iyo ku-tagri-fal awoodeed, waxaana eedo xooggan oo ku aaddan lunsashada xoolo dadweyne u jeediyay Agaasimahii hore ee Wasaaradda Qorsheynta Cabdiqaadir Maxamed.
Wasiir Jamaal ayaa mudo dheer joogay xafiiska, taasoo u fududeysay inuu sameysto xiriiro dibadda ah, oo aad u xoogan, waana ninka deeqbixiyaasha u gudbiya mashaariicda dowladda, wuxuuna soo noqdey Safiirka Soomaaliya ee Kenya.
Zakariye Xaaji, dhankiisa, wuxuu ka mid ah yahay shaqsiyaadka ku dhawaad labaatankii sano ee la soo dhaafay macaashka ugu jiray Siyaasadda Soomaaliya, Jamaal iyo Zakariye, waxa ay ka siman yihiin gacan bidixeynta, dadka reer Muqdisho, [Hawiye], .
Zakariye, wuxuu caan ku noqday sheegashooyinkiisa nacaybka Itoobiya, hayeeshee, guuxa shacabku ku suntay la shaqeynta Tigray, [Jaceylka Amxaarada] wuxuuna ugu horreeyaa shaqsiyaad sanado badan loo adaeegsanayay xasuuqa reer Muqdisho.
Warbixin qarsoodi ah oo ay soo saareen khubarrada cunaqabataynta Qaramada Midoobay ayaa Zakariye, ku eedeeyay unuu ka mid yahay wakiillo siyaasadeed oo xiriir la leh Al-Shabaab, kuwaas oo qatar ku ah xasilloonida Soomaaliya.
Wuxuu qabyaalad qaawan ku taageeray Farmaajo, wuxuuna indhaha ka daawaday muwaadiniin Soomaaliyeed oo loo dhiibayo Itoobiya, Ururo gobonimo doon ah oo lagu darayo liiska Argagixisada, iyo baarlamaankii oo la burbininayo.
Wuxuu si aan qarsoodi lahayn, u taageeray muddo kordhintii uu Farmaajo sameystay bishii April 2021, wuxuuna ugu horreeyay xildhibaannadii u ololeeyay una codeeyay muddo kordhintii horseedday dagaalladii caasimadda ka dhacay dhamaadkii bishaas.